အထွေထွေအဆောက်အ ဦး ပြားများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောသံမဏိကွိုင်၏ AZ30 Aluzinc ကုန်ကြမ်း - Jiang Lin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်း
အထွေထွေအဆောက်အ ဦး ပြားများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောသံမဏိကွိုင်၏ AZ30 Aluzinc ကုန်ကြမ်း
နှစ်စဉ်စွမ်းရည်: 700,000 တန်ချိန်
Aluzinc အပေါ်ယံပိုင်း: AZ30 – AZ185
အမျိုးအစားများ: အားလုံး, သွပ်ရည်စိမ်ထုတ်ကုန် အမှတ်အသားများ (Tags): ကိုရီးယား, ဖိလစ်ပိုင်
Galvalume သည် Al-zinc သတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိကွိုင်ဖြစ်သည်. လောလောဆယ်, 15-25% Al-zinc ကိုအများဆုံး ppgi ထုတ်လုပ်ရာတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်. Jianglin ၌တည်၏, ကျွန်ုပ်တို့သည် Al Zn billet ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
ကွဲပြားခြားနားသောစက်ရုံလိုအပ်ချက်နှင့်အတူ, Al-zinc အလွိုင်းပုံသေနည်းကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်, အရာအတောအတွင်း galvaluming ဖြစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းကိုရပ်တန့်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချပါ.
နှိုင်းယှဉ် 55% Aluzinc （ပုမြှောင်သည် ပို၍ ရှုထောင်သည်, အစွန်းကပိုရှင်းပါတယ်）
အဆင့် DC51D + AZ, DC53D + AZ, S250GD + AZ,S300GD + AZ, S350GD + AZ, S550GD + AZ
အထူ(မီလီမီတာ) 0.16မီလီမီတာ - 2.5mm
အကျယ်(မီလီမီတာ) 600မီလီမီတာ - 1250mm
Outside Diameter(မီလီမီတာ) 2000မီလီမီတာ
Spangle ပုံမှန် spangle, သေးသေးလေးသေး, ဗန်းကြီးကြီး
မျက်နှာပြင်ကုသမှု chromated, ဆီ, ဓာတုကုသမှုနှင့်ရေနံ, ခြောက်သွေ့, လက်ချောင်းဖောင်းပွမှု
Aluzinc အထူ 30/30, 40/40, 50/50, 60/60, 75/75, 90/90, 110/110
Galvanized ကွိုင်နှင့် Galvalume ကွိုင်အကြားနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Aluzinc အပေါ်ယံပိုင်းသည် 55% Al-zinc ပါဝင်မှု, သွပ်ရည်စိမ်ကွိုင်သည်စင်ကြယ်သောသွပ်ဖြစ်သည်.
Aluzinc ကွိုင်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓာတ်များကိုကာကွယ်နိုင်သည်, သုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်.
သွပ်ရည်စိမ်ကွိုင်ထုတ်လုပ်သည်, မီးဖို Galvalume ကွိုင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်ဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်. သွပ်ရည်စိမ်ကွိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ, အနည်းဆုံးလတိုင်းမီးဖို၌နှစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည်. သို့သော်, galvalume ကွိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ, မီးဖိုသန့်ရှင်းရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းနည်းသည်, အရာစက်ရုံအများကြီးကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ.
DC51D + AZ နှင့် DC52D + AZ ကိုသာမန်အားဖြင့်ပုံမှန်အအေးခန်းများတွင်အသုံးပြုသည် , အများဆုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းအပါအဝင်စီးပွားဖြစ်ထုတ်ကုန်, ပရိဘောဂ. S250GD, S300GD, S350GD, S550GD ကိုအဓိကအားဖြင့်တည်ဆောက်ပုံအတွက်အသုံးပြုသည်, သို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေး.
Jianglin Corportion ရှိသည်3ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ.
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ထုတ်လုပ်ခြင်း Galvanizing ထုတ်လုပ်မှု PPGI &PPGL ထုတ်လုပ်မှု
တပ်ဆင်ချိန် 2002 2008 2012
စွမ်းရည် 700,000 တန်ချိန် 650,000 တန်ချိန် 350,000 တန်ချိန်
အထူ 0.12-5.0မီလီမီတာ(အများအားဖြင့် 0.3-0.8mm)
အကျယ် 600-1250မီလီမီတာ 600-1250မီလီမီတာ 600-1q50 မီလီမီတာ
ကွိုင်အလေးချိန် 3-15 တန်ချိန်
ပစ္စည်းအခြေခံ အေးခဲသွားသည်, ပေးပါ, Aluzinc ကွိုင်
အဆင့် SGCC, SGHC
သုတ်အမျိုးအစား ON, SMD, HDP, PVDF
လုပ်ဆောင်ချက် Surface ကွဲပြားခြားနားသောပုံနှိပ်ပုံစံ(စကျင်ကျောက်, သစ်သားစပါး), antifinger, အငြိမ်မနေရ, ပုတ်သင်ညို
1.Cold Rolling ထုတ်လုပ်မှု
Jianglin ကိုတပ်ဆင်ထားသည်3ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ6လိပ်စက်များသည်ကွိုင်၏တိကျသောအထူကိုအာမခံသည်. နှစ်စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုပမာဏထက်ပိုသည် 700,000 တန်ချိန်.
Jianglin ကိုတပ်ဆင်ထားသည်3Zinc coating line တစ်ခုနှင့် Aluzinc ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှစ်ခုအပါအ ၀ င် galvanizing ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ. နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုသည်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည် 600,000 တန်ချိန်. အအေးခံထားသောကွိုင်အချို့ကိုကွဲပြားသောစက်ရုံများသို့ရောင်းချသည်.
ထူဘို့, ငါတို့က 0.3-0.8mm ကိုအာရုံစိုက်တယ်. Shandong စျေးကွက်သွပ်ရည်စိမ်ကွိုင်အများစုသည် Jianglin မှဖြစ်သည်.
3.PPGL နှင့် PPGI ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Jangling PPGI &PPGL သည်အများအားဖြင့်ပြည်ပမှ ၀ ယ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်, သွပ်အပေါ်ယံအထူပေါ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်လိုအပ်ချက်ရှိသည်.
Jianglin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်းသည် 6S စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုတင်းကြပ်စွာကျင့်သုံးနေသည်. အတိတ်အတွက်5နှစ်များ, ကမ္ဘာ့သံမဏိဈေးကွက်သည်အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေအောက်တွင်ရှိသည်, ငါတို့ရောက်နေပြီ 5%-9% ဝင်ငွေတိုးသည်.
GI အတွဲတစ်ခုစီအတွက်, PPGI, PPGL, အထူအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးလိမ့်မည်, မျက်နှာပြင်, နှင့်အခြား parameters တွေကို, အရည်အသွေးအာမခံရန်သာ. ဤအတောအတွင်း, ကွိုင်တိုင်းကိုခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမိန့်ခြေရာခံစနစ်ရှိသည်. မည်သည့်အမှားမဆိုဖြစ်တတ်ပါတယ်, ငါတို့တာဝန်ယူလိမ့်မယ်.
Jianglin ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် 700,000 တစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန်, ကျွန်ုပ်တို့သည် COSCO အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစာရင်းတင်သင်္ဘောကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ LOGISTICS များ, CMA, နှင့်အခြားသင်္ဘောကုမ္ပဏီများ. အထွတ်အထိပ်ရာသီအတွင်းကွန်တိန်နာများသည်ကြိုတင်မှာယူရန်ခဲယဉ်းသည်, သင့်တော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အချိန်ဇယားဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်းကိုကြိုတင်မှာယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲပျော်သည်
Jianglin သည် LC အပါအ ၀ င်မည်သည့်လျော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုလက်ခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ , နိုင်ပွဲတစ်ပွဲအတွက်မျှော်လင့်ချက်သာဖြစ်သည်. ဤအတောအတွင်း, ငါတို့လည်း Alibaba နဲ့ပူးပေါင်းတယ်. Alibaba လုံခြုံရေးအာမခံချက်အမိန့်ကိုကြိုဆိုပါသည်.
– သာမာန်, ကွိုင်တစ်ခုအတွက် MOQ 1 မင်းရဲ့.
– ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်: 30%ပစ္စည်းမပို့မီ T/T deposit 70%T/T - မိတ်ဖက်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက်, 30%T/T သိုက် 70% T/T သည် B/L Copy ကိုဆန့်ကျင်သည်.
မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်အတွက်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက် ၃၀ LC ကိုလက်ခံနိုင်သည်.
– ငါတို့ USD ကိုလက်ခံတယ်, EUR နှင့် RMB.
– 5-10 စတော့ရှယ်ယာအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ရက်အနည်းငယ်ကြိုတင်ရသည်.
– သာမာန်, ကျွန်ုပ်တို့၏တင်သောဆိပ်ကမ်းများမှာ Tianjin ဖြစ်သည်, နှင့်ရှန်ဒေါင်း. သို့မဟုတ် ၀ ယ်သူသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိမည်သည့်ဆိပ်ကမ်းကိုမဆိုသတ်မှတ်နိုင်သည်.
– ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာအခြေအနေပေါ်မူတည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအခမဲ့နမူနာများပို့လိမ့်မည်. အမြန်ကြေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကပေးဆောင်ရမည်.
ပုံစံ PPGI ( သစ်တော, စကျင်ကျောက်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စျေးကွက်အတွက်ပန်းပွင့်ပုံစံ ppgi)
သွပ်ရည်စိမ်စတုဂံပိုက် / Pregalvanized ပိုက် / Tube
အပြာရောင် Tint / အပြာရောင်ဗဓေလသစ် Galvalume သံမဏိစာရွက်ကွိုင် (G350 / G450 / G550)